Doorashada Hoggaanka NUSOJ oo dib loo dhigay – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Doorashada Hoggaanka NUSOJ oo dib loo dhigay
Guddiga Madaxa ee Saxaafadda Soomaaliya ayaa shaaciyay in loo dhigay doorashadii Hoggaamiyaha Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed ee NUSOJ oo maalmihii la soo dhaafay ay qaban qaabadiisa ka socotay gudaha dalka iyo dibadda.
Ismaaciil Sheekh Khaliif oo ka mid ah guddiga Saxaafadda Madaxa banaan ayaa Warbaahinta maanta u sheegay in doorashada lagu waday in ay dhacdo maalinta beri ah dib loo dhigay illaa 28-ka bishana April 2016 kadib markii Maxkamadda Racfaanka Gobolka Banaadir ay soo jeedisay talooyin ah in waqtigaasi la gaarsiiyo doorashada.
Horay ayaa waxaa Hoggaanka Ururka NUSOJ isugu heystay Cumar Faaruuq Cismaan iyo Maxamed Ibraahim Pakistan iyadoo guddigaan uu muddo dhex dhexaadin ka dhex waday labada dhinac, kuna guuleystay in uu ku qanciyo labada dhinac in doorasho weyn la qabto.
Waxaa kaloo xusid mudan in inta dadaaladani ay socdeen uu is casilay Maxamed Ibraahim Pakistan , waxaana dhammaan Saxaafadda Soomaaliyeed ay isha ku wada hayaan doorashadaas hoggaanka NUSOJ oo la filayo in ay ka dhacdo Magaalada Muqdisho.
Previous: Puntland oo sheegtay in ay gacanta ku dhigtay gaari walxaha Qarxo ay saaran yihiin
Next: Somali leaders give condolences on report of many drowned